दुई पुरुषको प्रेमिका एउटै युवती - Rastrakokhabar
दुई पुरुषको प्रेमिका एउटै युवती
१९ पुष २०७७, आईतवार १०:००
एजेन्सी । ब्राजिलका दुईजना निकै मिल्ने साथीहरुले एउटै युवतीसंग प्रेम गरेका छन । उनीहरुको यो प्रेम पछिल्लो डेढ बर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ ।
यिनीहरु अन्य युगल जोडीहरु जस्तै रेष्टुरेन्टहरुमा डेट्समा जान्छन । ४० बर्षीय डिसुजा र ३० बर्षीय साउलो गोम्स दुवैजना अत्यन्तै मिल्ने साथी हुन ।
अघिल्लो बर्ष दुवैजना छुट्टी मनाउन बार्सिलोना गएका थिए । त्यही क्रममा डिसुजा र गोम्स बेलारुसको एक बारमा पुगेका थिए । त्यहाँ दुवैजनाको २७ बर्षीया युवती ओल्गासंग भेट भयो ।
ओल्गा पनि आफ्ना अन्य महिला साथीहरुसंग बारमा आएकी थिइन । त्यसबेला डिसुजा र गोम्सले ओल्गासंग एकैसाथ प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसपछि तिनैजनाले एकैसाथ डेटमा जान शुरु गरेका हुन ।
यो अनौठो त्रिकोणात्मक प्रेम कहानी बारे डिसुजाले भने, “गोम्स र म संगै बार्सिलोनामा फुटबल म्याच हेर्न गएका थियौं । त्यहीं हाम्रो भेट ओल्गासंग भयो । हामीले शुरुमा उनलाई ड्र्रिंकका लागि अफर गरेका थियौं । त्यहींबाट हाम्रो प्रेम सम्बन्ध शुरु भएको हो । हामी तीनैजना प्रेम सम्बन्धमा हुनु हाम्रालाई कुनै समस्याको विषय हैन । मुख्य कुरा के हो भने हामी तीनै जनाबीचको क्यामेस्ट्री अत्यन्तै राम्रो र बलियो छ ।”
एकैसाथ तीन जना बीच प्रेम सम्बन्ध कायम भएको यो अनौठो घटना प्रति शुरुमा डिसुजा र गोम्सका अन्य साथीहरु र परिवारले समेत आश्चर्य ब्यक्त गरे । तीनै जनाबीच के भैरहेको छ भन्ने बारेमा निकै सोधीखोजी पनि गरेको डिसुजाले बताए ।
त्यसपछि डिसुजा र गोम्स दुवैजनाले ओल्गासंगको प्रेम सम्बन्धका बारेमा साथीहरु र परिवारका अन्य सदस्यहरुलाई निसंकोच र सहज रुपमा बताए । यसपछि डिसुजा र गोम्स प्रति उनिहरुका साथी भाई र परिवारको सोंच बदलियो ।
अहिले सबैले उनीहरुबीचको त्रिकोणात्मक प्रेमको समर्थन गरेका छन । पछिल्लो डेढ बर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका डिसुजा, ओल्गा र गोम्स तीनैजना हाल फ्रान्समा बस्छन ।
अहिले डिसुजा र गोम्सले ओल्गासंग बच्चा पनि जन्माउन चाहन्छन । डिसुजा र गोम्सले आफ्नो ब्यवसाय बढाउन चाहेको र विश्व भ्रमण गर्दै सामान्य रुपमा जीवनयापन गर्न चाहेको डेलीमेलले जनाएको छ ।
Previous Post	आजको राशिफल (वि.सं. २०७७ पुस १९ गते, आइतवार)
Next Post	कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै
२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार १२:४६
१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १५:४८
अचम्मको विवाह, बेहुला एक, बेहुली दुई !
२४ पुष २०७७, शुक्रबार १३:४८